Dowlada Talyaaniga Oo Xaqiijinaysa In Taageerayaashu Ay Ka Qeybgali Karaan Ciyaaraha Euro 2020 Ee Rome. - Ciyaaro
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Dowlada Talyaaniga oo xaqiijinaysa in taageerayaashu ay ka qeybgali karaan ciyaaraha Euro...
Dowlada Talyaaniga oo xaqiijinaysa in taageerayaashu ay ka qeybgali karaan ciyaaraha Euro 2020 ee Rome.
Dowlada Talyaanigu waxay go’aansatay in garoonka Rome ee ciyaaraha Olimbikada dib loogu furi karo dadweynaha ciyaaraha tartamada Yurub, xiriirka kubada cagta Talyaaniga (FIGC) ayaa sheegay.
Tartanka Euro 2020 ayaa dib loo dhigay sanadkii hore sababa la xiriira cudurka faafa ee 19-ka iyo UEFA, oo ah guddiga kubada cagta Yurub, ayaa ka codsaday 12ka dal ee martigelinaya inay soo gudbiyaan qorshayaasha loogu ogolaanayo taageerayaasha gudaha garoomada horraanta Abriil.
Madaxweynaha FIGC Gabriele Gravina ayaa yidhi Wasiirka Caafimaadka Roberto Speranza wuxuu noo sheegay in lataliyayaasha cilmiga sayniska ay cadeyn doonaan xalka ugu fiican ee u ogolaanaya shacabka inay ka qeyb galaan garoonka ciyaaraha Olambikada ee Rome tartamada Yurub.
Waxaan iskaashi la yeelan doonnaa xoghayaha isboortiga ee Valentina Vezzali oo qeyb ka ah dariiqan Waxaan helnay calaamad adag oo ku saabsan dib u bilaabashadan oo aan si dhaqso leh ugu wareejin doono UEFA.
Turkey iyo Italy ayaa lagu wadaa inay ciyaaraan furitaanka Euro 2020 magaalada Rome bisha June 11, ka hor inta Azzurri ay la ciyaari doonin kooxaha kale ee ka soo horjeeda sida Switzerland iyo Wales, halka caasimada Talyaaniga ay sidoo kale martigelin doonto kulan wareega 8da ah.
Talyaanigu waa mid ka mid ah 12 waddan oo martigeliya Yurub oo dhan Tirada taageerayaasha awoodi doona inay ka soo qeyb galaan ma cadda, laakiin ilo dowladeed ayaa u sheegay Reuters in habka tallaalku uu fure u yahay go’aanka ugu dambeeya.
Dowlada Talyaanigu waxay ka codsatay CTS Guddiga Khubarada Dowlada inay qiimeeyaan xaalada cudurka faafa ee socda iyo isbedelka talaalada Markaa, waxay baari kartaa suurtagalnimada bixinta jiritaanka dadweynaha oo kooban tartamada Yurub.
Xiriirka kubada cagta ee Talyaanigu wuxuu ka fiirsanayaa inuu qaato codsi taleefan oo ay soo saareen shirkad yar, oo bilow ah taasoo qeyb ka ah qorshe loogu talagalay in taageerayaasha loo ogolaado inay ka soo qeyb galaan.
Barnaamijka Mitiga waxaa loo sameeyay in lagu helo xal si badbaado leh dib loogu furo dhacdooyinka iyadoo la siinayo marin u helka isticmaaleyaasha taban ee leh tijaabada antigen-ka degdega ah ama isticmaaleyaasha la tallaalay ayay soo saareen barnaamijyada Daniele Coccia iyo Fabio Traini oo u sheegay Reuters.
Talyaanigu wuxuu ku dhex jiraa xaalad kale oo halis ah oo ku saabsan kiisaska coronavirus wuxuuna leeyahay dhimashada labaad ee ugu sarreysa Yurub kadib Britain, iyadoo boqolaal ay wali dhimanayaan maalin kasta sida lagu sheegay xogtii ugu dambeysay.
Previous articleMan United oo dooneysa inay ka afduubato heshiiska Liverpool Ibrahima Konate?
Next articleZidane Zidane oo albaabada u furay inuu macalin u noqdo Juventus.